Shir xal loogu raadinaya muranka ka dhashay qaybsashada dakhliga oo maanta la qabanaya – Radio Damal
Shir xal loogu raadinaya muranka ka dhashay qaybsashada dakhliga oo maanta la qabanaya
Wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta howlaha qaranka Mr. Ukur Yatani ayaa isugu yeeray kulan ay ka soo qayb galayaan mas’uuliyiin kala duwan kaasoo lagu wado inuu maanta qabsoomo.
Mr. Yatani ayaa sheegay inuu rajeynayo in shirkan xal loogu helo qaabka ismaamullada wadanka ay u qaybsanayaan dakhliga.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii aqalka sare oo yeeshay kal-fadhigii lixaad uu ku guul dareystay inuu hannaanka la soo jeediyay ansaxiyo.
Iyadoo senetarada ay mar kale kulmayaan berri oo Talaado ah ayuu wasiirka maaliyadda doonaya in Isfahan kama dambeys ah arrinkan laga gaaro.
Nidaamka qaybsiga dakhliga ee ismaamullada ee la isku hayo ayaa ah midkii saddexaad.
Senatarrada qaar ayaa codkooda ku taageeray in ismaamullada ay dhaqaalaha ku qaybsadaan tirada dadweynaha ku nool.
Qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare oo uu ka mid yahay senatarka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa dhaqangelinta nidaamkan ku tilmaamay cadaalad darro maadaama ay horseedeyso in dowlad deegaanada aynan ka sinnaan dhanka horumarka.
Siyaasiyiinta laga soo doortay deegaanada xoolo dhaqatada ayaa ka soo horjeestay waxayna sheegeen in hadii la meel mariyo ay dhaqaale badan ku luminayaan.
Wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in kulanka maanta oo qaab online ah loo qabanaya ay ka qayb galayaan hoggaanka aqalka sare , golaha ay ku mideysan yihiin barasaabyada ismaamullada wadanka ee COG ,Maareeyaha miisaaniyada iyo xeer ilaaliyaha guud .
Guddoomiyaha aqalka sare Mr . Ken Lusaka ayaa dhankiisa sheegay inay wanaagasan tahay in la helo xal sida ugu dhakhsiyaha badan si ismaamullada looga badbaadiyo dhaqaale xumo soo foodsaarto.
Senetarka ismaamulka Murang’a ahna mas’uulka xisbiga Jubilee u qaabilsan dhanka nidaamka ee aqalka sare Mr. Irungu Kang’ata ayaa xusay inay sameynayaan wax walbo oo suurtagal ah si loo xalliyo Isfahan waaga jira.
Waxaa jiro warar sheegaya in Mr. Kangata uu ku dadaalaya sidii uu taageero uga heli lahaa madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga mucaaradka ODM, Raila Odinga si ay siyaasiyiinta kala taabacsan ugu qanciyaan in talaadada arrinkan la soo afjaro.